Kooxaha wada ciyaari doona Community Shield oo la shaaciyay, kaddib markii ay Man City ku wada guuleysatay Premier League iyo FA Cup – Gool FM
(England) 18 Maajo 2019. Manchester City ayaa caawa ku guuleysatay koobka FA Cup, kaddib markii ay 6-0 dirtay kooxda Watford kulankii finalka ee ka dhacay garoonka Wembley.
Taasi waxay ka dhigan tahay in kooxda uu hogaamiyo macalinka reer Spain ee Pep Guardiola ay xili ciyaareedka 2018/2019 ku wada guuleysatay 3-da koob ee laga dhigo gudaha dalka England eek ala ha Premier League, League Cup iyo FA Cup, iyadoo taariikh cusub u dhigtay kooxaha Ingiriiska, maadaama aysan jiray koox hal xili ciyaareed kuwada guuleysatay saddexdaas koob.
Sida caadiga ah koobka FA Community Shield waxaa bilawga xili ciyaareed kasta ee cusub wada ciyaara kooxda ku soo guuleysata Premier League iyo tan qaada koobka FA Cup-ka, maadaama ay xili ciyaareedkan Sky Blues ku wada guuleysatay Premier League iyo FA Cup, kooxdee ayay kula ciyaari doontaa kulanka FA Community Shield?.
Hadaba kooxda Manchester City ayaa la ciyaari doonta dhigeeda Liverpool kulanka FA Community Shield-ka, xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020.
Kooxda muwaadiniinta lagu naaneyso ee City ayaa kuwada guuleysatay Premier League iyo FA Cup, sidaas darteed waxa ay wajihi doonaan kooxda ay ka qaaday horyaalka Premier League oo kaalinta labaad xilli ciyaareedkan kaga dhammaysatay horyaalka Ingiriiska ee Liverpool.
Manchester City ayaa xili ciyaareedkan horyaalka Premier League ku qaaday 98 dhibcood, halka kooxda kaalinta 2-aad ee Reds ay keensatay 97 dhibcood, waxaana looga qaaday horyaalka hal dhibac oo kaliya.
Hordhac: Real Madrid vs Real Betis - Los Blancos oo soo afjari doonta fasal ciyaareed ay tahay iney iska ilowdo.